के हो रुसले भारतलाई दिएको एस–४०० हतियार प्रणाली? यसले भारतलाई चीनको खतराबाट सुरक्षित राख्ला? - Dainik Online Dainik Online
के हो रुसले भारतलाई दिएको एस–४०० हतियार प्रणाली? यसले भारतलाई चीनको खतराबाट सुरक्षित राख्ला?
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७८, बुधबार १० : २०
नयाँ दिल्ली । रसियाले भारतलाई एस– ४०० हतियार प्रणाली दिएको छ । भारतको चीन र पाकिस्तानसँग सीमामा तनाब बढिरहेका बेला मस्कोले आणविक उर्जायुक्त हतियार प्रणाली नयाँ दिल्लीलाई दिएको हो ।
रसियाली राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको भारत भ्रमण अगाडि नै सो प्रणाली नयाँ दिल्ली ल्याउन लागिएको हो । यस प्रणालीका केही इकाइहरू जल तथा वायुमार्ग हुँँदै भारततर्फ आउँदैछन् ।
हतियार प्रणालीलाई सन् २०२२ को अप्रिल महिनासम्ममा चीन र पाकिस्तानसँगको सीमामा राखिने भारतको तयारी छ । रणनीतिक महत्वको पश्चिमी क्षेत्रबाट सो प्रणालीले चीन र पाकिस्तानको सम्भावित जोखिमलाई निस्तेज पार्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
‘रसियाले एस ४०० वायु रक्षा प्रणाली भारतलाई प्रदान गरेको छ । पहिलो इकाई छिट्टै नयाँ दिल्ली पुग्नेछ । ’ रसियाको फेडरल सर्भिस फर मिलटरी टेक्निकल कोअपरेसन (एफएसएमटीसी) का निर्देशक दिमित्रे शुगेभले भने । एफएसएमटीसीलाई रसिया महासंघले व्यबस्थापन गर्छ ।
यही ६ डिसेम्बरमा आयोजना हुने बार्षिक भारत– रसिया सम्मेलनका लागि पुटिन नयाँ दिल्ली आउँदैछन् । एक दिवसीय भ्रमणका अवसरमा भारत र रसियाबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछन् ।
पुटिनले बार्षिक सम्मेलनका अवसरमा सन् २०१८ मा भारतको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका अवसरमा एस– ४०० प्रणाली सम्झौताबारे दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । मस्को नयाँ दिल्लीको ठूलो रक्षा साझेदार देश हो ।
के हो एस– ४०० प्रणाली ?
यो सन् १९९० को मध्यतिर रसियाको आल्माज सेन्ट्रल डिजाइन ब्युरो फर मारिन इन्जिनियरिङले विकसित गरेको जमीनबाट आकाशमा मार हान्ने क्षेप्यास्त्र प्रणाली हो । एस–४०० मा ८ देखि १० ओटासम्म लन्चर र आवश्यकताअनुसार क्षेप्यास्त्र जडान गरिएका हुन्छन् ।
यसले शत्रुको लडाकु विमान, ब्यालिस्टिक मिसाईल र क्रुजजस्ता क्षेप्यास्त्रलाई टाढाबाट ध्वस्त पार्न सक्छ । ४०० किलोमिटर टाढाबाट मार हान्न सक्ने भएकोले यसलाई एस–४०० नाम दिइएको हो ।
यसले एकैपटकमा ३६ वटा क्षेत्रमा निशान बनाउन सक्छ । शत्रुले आकाशमा प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्रलाई पहिचान गर्न सक्नु यो प्रणालीको मुख्य विशेषता हो । रसियाले यो प्रणाली अमेरिकी लडाकु विमान र क्षेप्यास्त्रहरूलाई पत्ता लगाएर ध्वस्त पार्न बनाएको हो । त्यही भएर अहिले भारतसँग अमेरिका चिढिएको छ ।
यो प्रणालीले एशियामा नै भारतलाई रक्षाका दृष्टिले बलियो बनाउने विज्ञहरुको भनाई छ । एस–४०० हतियार प्रणाली चीनसँग पनि छ । चीनले तिब्बत नजिकै पर्ने सिचुआन प्रान्तको एउटा हवाई आधारमा यो प्रणाली तैथान गरेको छ ।
मनाङका बाढीपीडितले घर बनाउन साढे पाँच महिनापछि पाए अनुदान
लमजुङ । मनाङका बाढीपीडितलाई साढे पाँच महिनापछि २ लाख रुपैयाँ नगद राहत उपलब्ध गराइएको छ
चितवन । विगत १० वर्षदेखि तटबन्ध थालिए पनि बजेट अभावमा काम हुन नसकेको नारायणी नदी
मानव अधिकार उल्लंघन कारण देखाउँदै अमेरिकी कूटनीतिज्ञले बेइजिङ ओलिम्पिक्स बहिष्कार गरे
अमेरिकाले सन् २०२२ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा हुने शीतकालीन ओलिम्पिक्सलाई कूटनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा
माओवादी केन्द्रलाई पालिकामा नेतृत्व चयनमा सकस
कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई यहाँका स्थानीय तहका पार्टी कमिटीको नेतृत्व चयन गर्न
जन्ती बस दुर्घटना : घाइते एक जनाको मृत्यु
जाजरकोट । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–२, मा भएको बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका एक जनाको
‘साउथ एशियन इकोनोमिस्ट स्टुडेन्ट समिट’मा शाहीको नेतृत्वको टिम पहिलो
काठमाडौं । साउथ एशियन इकोनोमिस्ट स्टुडेन्ट समिटमा नेपाली विद्यार्थी निकिता शाहीले नेतृत्व गरेको टिम पहिलो
म्यानमारकी नेतृ सुकीको जेल सजाय ‍आधा घटाइयो
यांगुन । म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीको जेल सजाय आधा घटाइएको छ । म्यानमारको
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा दुई जना पाइलटको मृत्यु
इस्लामाबाद । पाकिस्तानको बाल्टिस्तानमा एउटा हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा दुई चालकको मृत्यु भएको छ । बाल्टिस्तानको
३ मिनेट अगाडि
५४ मिनेट अगाडि
कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको बैठक बस्दै, सभापतिमा साझा उम्मेदवार बनाइने
प्रहरी जवानलाई १६ बर्षमै पेन्सनमा घर जान पाउने गरि नियमावली बन्दै!
अध्यक्षमा पराजित भएपछि पूर्वराजालाई कमल थापाको धम्की !
‘चीनको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रबाट चिन्तित अमेरिका उत्तर कोरियासँग सहकार्य गर्न तयार’
हात खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा भेटियो हजार वर्षअघिको मम्मी!
जेठी श्रीमती कोपिलासँग निखिलले गरे डिभोर्स, १३ वर्ष अगाडि छाडेका थिए श्रीमती
अक्षय कुमारलाई ‘नो’ भनेका निर्मल पूर्जाले बियर ग्रिल्सलाई नेपाल ल्याउने